हिमाल खबरपत्रिका | हृदयघात छैन साथ
हृदयघातबारे जनचेतना कम त छँदैछ, तत्काल उपचार र एम्बुलेन्स सेवा समेत भरपर्दा छैनन्।
सडकमै कालः अधिकांश एम्बुलेन्समा हृदयघातका
लागि उपयोगी उपकरण छैनन्। भएका एम्बुलेन्स
पनि ट्राफिक जामले समयमै अस्पताल पुग्ने
अवस्था छैन। राजधानीको रत्नपार्क–भद्रकाली
सडकको ट्राफिक जाममा दुई एम्बुलेन्स ।
हृदयघात (हर्ट अट्याक) ले मुटुमा धेरै क्षति नपुर्‍याउँदै अस्पताल पुगेका शेषलाल श्रेष्ठ र धर्मरत्न खड्गी बाँचे, तर जोरपाटीका दीपक अधिकारी बाँच्न सकेनन्। अत्यासलाग्दो यथार्थ हो, राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि 'हर्ट अट्याक' हुने धेरैको ज्यान अस्पताल नपुग्दै र प्राथमिक उपचार नपाई जान्छ। राजधानीका करीब ३०० साना–ठूला अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमध्ये अधिकांशमा हृदयघातका बिरामीलाई तत्काल चाहिने प्राथमिक उपचार सेवा, दक्ष जनशक्ति र सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स छैनन्। देशभर काठमाडौंमा गंगालाल, मनमोहन कार्डियोथेरासिक सेन्टर (त्रिवि शिक्षण अस्पताल), वीर अस्पताल, नर्भिक अस्पताल र वयोदा अस्पताल तथा बाहिर भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस्, धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा मात्र मुटुको एञ्जियोप्लाष्टी उपचार गर्ने सुविधा भएको क्याथल्याब छ।
३ मंसीर बिहान ८ बजे हृदयघात भएका ललितपुर
ठैवका शेषलाल श्रेष्ठ गंगालाल हृदयरोग उपचार
केन्द्रमा । तस्वीर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
चिकित्सकहरू हृदयघात हुनासाथ घरैमा, नजिकको अस्पतालमा या स्वास्थ्य केन्द्रमा केही आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। यस्तो उपचारमा दुखाइ कम गर्ने 'एस्पि्रन' वा 'मर्फिन' जस्ता औषधि खुवाउने, इसीजी र मनिटरबाट मुटुको गति हेर्ने, धड्कन बन्द भएमा डिफिब्रिलेटर मेशीनले छातीमा विद्युतीय 'शक' दिने काम गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर युरोप, अमेरिकाका सिनेमा हल, डिपार्टमेण्टल स्टोर जस्ता सार्वजनिक ठाउँमा समेत डिफिब्रिलेटर मेशीन राखिएका हुन्छन्। तर, हामीकहाँ राजधानीमा पनि नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस (नास) ले साढेदुई वर्षदेखि मात्र हटलाइन १०२ मा फोन गरेर बोलाउन सकिने अक्सिजन, रगत, ग्लुकोज र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीसहितको एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरेको छ।
"हृदयघात हुनासाथ छेउछाउकै
स्वास्थ्य केन्द्रमा आकस्मिक
प्राथमिक उपचारको व्यवस्था
मिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो"
-डा. रामेश कोइराला,
तर, सत्तालिप्साबाट पीडित सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वले जनहितका लागि गर्नैपर्ने यी काममा चासो देखाएको छैन। निजी व्यवसायी र संघसंस्थाले जुटाएका एम्बुलेन्सबाट नासले हटलाइन सम्पर्कसहित शुरू गरेको सेवामा सहकार्य गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कुरा पनि कुरामै सीमित भएको छ। नासका पाँच वटा एम्बुलेन्सले डेढ वर्षमा ४००० हटलाइन कल लिएका छन्। आगन्तुकहरू समेत गरी करीब ४० लाख जनसंख्या रहेको राजधानीको लागि मात्र कम्तीमा ४० वटा 'ए' श्रेणीका सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स चाहिने नासका अध्यक्ष तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डीन डा. राजेश गंगोल बताउँछन्।
मुटुको रक्तनलीमा बोसो जमेर हुने 'कोर्नरी अर्टरी डिजिज'ले हृदयघात निम्त्याउँछ। रक्तनलीमा विभिन्न कारणले जमेको बोसो फुटेपछि रगत जमेर मुटुको रक्त सञ्चालन प्रक्रिया बन्द भएपछि हृदयघात हुन्छ। हरेक मानिसको शरीरमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने अंग नै मुटु हो। मुटुको मांसपेशी चौबीसै घण्टा सक्रिय रहने र यसका लागि सबैभन्दा बढी शक्ति र खानेकुरा आवश्यक पर्छ। यही क्रममा मुटुको रक्तनलीहरूमा मधुमेह, सूर्तीजन्य वस्तु, उच्च कोलेस्ट्रल, उच्च रक्तचाप, मोटोपना आदिका कारणले फोहोर या बोसो जम्छ र यसले रक्त प्रवाह रोकेपछि हृदयघात हुन्छ।
हृदयघात हुनुअघि नै सचेतना अपनाउने हो भने ज्यान जाने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार बायाँ छाती या बीच भाग दुख्ने र बायाँ कुम दुख्ने, चिट्चिट् पसिना आउने हुनासाथ ट्याक्सी या कुनै वाहन समातेर नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र गइहाल्नुपर्छ। तर, नेपाली समाज अझै पनि 'हर्ट अट्याक' भन्ने थाहा नपाएर बोक्सी र धामीले भेद्यो भनेर झारफुकतिर लाग्ने अवस्थामै रहेको हर्ट टु हर्ट नेपालका अध्यक्ष नवीन राई बताउँछन्। शहरिया समाजमै पनि छाती दुखेपछि ग्यास्टिक लाग्यो भनेर तातोपानी खान खोज्ने अस्पताल जान तुरुन्तै ट्याक्सी, एम्बुलेन्स नखोजेर आफन्त, साथीको गाडी, मोटरसाइकल कुरेर बस्ने र निकै गाह्रो भइसकेपछि अस्पताल पुग्ने गरेको उनी बताउँछन्।
४ मंसिर दिउँसो १२ बजे ७६ बर्षका बुबा (सोमबहादुर) लाई सास फेर्न गाहो भएपछि तीन घण्टा बिकेर सिंगटी पुर्यायौं । औषधि पसलेले मुटुको समस्याको शंका गरेर हतार हतार जीपमा हाली दुई घण्टाको बाटो सदरमुकाम चरिकोट पठाँए । चरिकोटको अस्पतालमा डाक्टरले 'पित्त सुन्निए जस्तो छ, एक हप्ता राखेर हेर्नुपर्छ' भने, तर बुबालाई झन्-झन् साहो भएकाले भोलिपल्ट काठमाडौंको विर अस्पताल पुर्‍यायौं। त्यहाँ साढेदुई घण्टाको परिक्षणपछि डाक्टरले 'हर्ट अट्याक' भएको भन्दै गंगालाल लैजान भने । हामीलाई त हृदयघात भएको थाहा पाउनै दुई दिन लाग्यो, २०५२ सालमा हजुरबा र २०५८ मा छिमेकी बहादुर ठकुरी पनि यहि रोगले मरेका रहेछन् भन्ने पनि बल्ल थाहा पाइयो ।